Ny antony mahatonga ny aretina Reef Resilience
Ny aretina Coral dia fiasa voajanahary, vokatry ny adin-tsaina sy ny abiotika, saingy misy antony maromaro, mety hampitombo ny aretina sy ny fipoahana. Ny tsiranoka amin'ny biotic dia ny vokatry ny zavamananaina (ohatra, ny patogenite, ny parasy) ary ny adin-tsiranoka manimba ny tontolo iainana (toy ny fiovana amin'ny salinity, ny hafanana, ny hazavana).
Ny antony mahatonga ny valanaretina momba ny haran-dranomasina dia sarotra sy tsy takatry ny saina, na dia fikarohana aza dia mampiseho fa ny mpamily voan'ny aretin'ny vatohara dia ahitana fiakaran'ny hafanana, ary ny hafa anthropogenic stressors toy ny fandotoana ny tany, ny fandotoana, ny fanimbana ary ny fampiasan'ny olombelona. Ny mpahay siansa dia mianatra misimisy kokoa momba ny antony mararin'ny fahasimban'ny vatohara, indrindra amin'ny famantarana ny voka-dratsy. Ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-biôlôjika dia vokatry ny bakteria bitika sy macro misy ny bakteria, ref Ny proteinina mikrobia mikraobia, cyliobacteria, ciliates ary parasites. ref Hatramin'izao, ireo aretina azo avy amin'ny vatohara indrindra dia vokatry ny bakteria.
Misy fifandraisana manan-danja eo anelanelan'ny fihanaky ny aretina ny vatohara sy ny haavon'ny rano, ref ny fihenan'ny kalitaon'ny rano, ref venty sy tebiteby, ref ary ny hamaroan'ny haran-dranomasina.
Ampiasao ireo tabilao etsy ambany mba hianarana bebe kokoa momba ny fandefasana ny transmissions sy ny mpamorona tontolo iainana momba ny areti-mandoza.
Mpitandro ny tontolo iainana
Ny rafitra maro sy ny tontolo iainana dia manohana ny fifindran'ny aretina, anisan'izany ireo faritra avo indrindra amin'ny vatohara, ny kalitaon'ny rano, ary ireo biby mpiremby (sasany, trondro trondro, polychaetes ary gastropods). ref Zava-dehibe ho an'ny mpitantana ny mahafantatra ireo fomba amam-panao momba ny aretina, araka ny fanazavana fanaraha-maso ny ezaka izay manampy amin'ny fitarihana farany fitantanana fitantanana.
Aretina matevina miala avy hatrany mankany amin'ny ilany havia Diploria strigosa. Sary © Sven Zea, Universidad Nacional de Colombia / Marine Fotobank
Tahaka ny isan'ny mponina, ny karazam-boankazo amin'ny habetsahana ambony kokoa dia mety ho mora voan'ny aretina.ref Ohatra, ny aretina fotsy hoditra dia mihamitombo amin'ny faritra izay misy ny saron'ny vatohara.ref Izany dia noho ny aretina afaka manaparitaka mora kokoa ao anatin'ny mponina be mponina. Noho izany, ny karazana voanjo iombonana dia mety hanana hery lehibe kokoa noho ny karazana tsy fahita firy. ref
Coral predation dia fomba iray hafa izay mety hanamora ny fifindran'ny aretina amin'ny populaire be mponina. Ny mpanafika dia afaka mihetsika toy ny vatana amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny orza na ny fifindran'ny otrikaretina. ref Ohatra, aretin-kozatra mainty hoditra no heverina ho fandavan-tena eo anatrehan'ireo fiara mifono vy.ref Ny voay hafa, toy ny gastropod Drupella tsolika, dia ahiana hampitombo ny tahan'ny aretina ateraky ny voan'ny aretina tsy voan'ny aretina. ref Ny vaksin-tseza hafa momba ny haran-dranomasina dia afo mpirehitra, Hermodice carunculata, ny toetrany dia hita any amin'ny seranana Vibrio shiloi (ny fanodinkodinan'ny fanafody bakteria any amin'ny vatohara Mediteraneana) ref ary lolozy, izay mikarakara trematode (parasitic flatworm) izay maniry Porites. ref
Ireo mpamily ny tontolo iainana, toy ny mari-pana, ny kalitaon'ny rano, ary ny fandotoana, dia mety hisy fiantraikany amin'ny aretina. ref
Ny fiakaran'ny mari-pana eny amin'ny ranomasina dia heverina fa hisy fiantraikany amin'ny aretina amin'ny haran-koditra amin'ny fomba roa:
Mampirisika ny areti-mifindra amin'ny alàlan'ny fanelingelenana ny rafitra fiarovana ny trano fandraisam-bahiny. Ny fitomboan'ny mari-pana dia mety hisy fiantraikany amin'ny karazana biôlôjia sy ara-batana fototra, indrindra fa ny fahafahany miady amin'ny aretina. Izany dia manana fiantraikany amin'ny fifandanjana eo amin'ny mety ho aretina sy ny mpampiantrano.ref
Mampitombo ny virulenza na ny tahan'ny fatran'ny aretina.ref
Ny aspergillose dia miteraka vatomamy avy amin'ny ranomasina Gorgonia ventalina ao amin'ny Florida Keys. Sary © Craig Quirolo / Reef Relief
Ny firaisana ara-nofo amin'ny aretina dia manome fanohanana bebe kokoa ny fifandraisana eo amin'ny fampiroboroboana ny ranomasimbe. Ohatra, ao amin'ny Haran-dranomasina Lehibe, ny fihenan'ny aretina ny haran-dranomasina dia nanomboka tamin'ny ririnina ka hatramin'ny fahavaratra amin'ny fianakaviana lehibe rehetra ao amin'ny vatohara. Ny fifandraisana eo anelanelan'ny fipoahana na ny fihenan'ny aretina sy ny hafanana mangatsiaka dia voamarina ho an'ny aretina mainty, aspergillose, aretina mavo, fotsy hoditra fotsy sy sendikà fotsy.
Ny aretina ao amin'ny Coral dia mora ihany koa amin'ny fihenan'ny kalitaon'ny rano, indrindra noho ny fanasitranana sy ny fandosirana. Ny porofo vao haingana dia maneho ny fiantraikan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny elefanta sy ny aretina. Ny haavon-tsakafo avo lenta (ohatra nitroka sy phosphorus) dia mifandraika amin'ny mari-pamantarana miparitaka amin'ny areti-nify mavo - ary ny aspergillose - voan'ny aretina azo avy amin'ny saha ref ary tamin'ny aretina mainty. ref
Sedimentation dia mety hitondra anjara biriky amin'ny valanaretina momba ny haran-dranomasina. Ny fiantraikan'ny firoboroboan'ny tany eo amin'ny faritra manodidina ny morontsiraka dia hita sy voamarina tsara; Ny vatoharan-tany misy harambato voapoizina matetika dia manana paty lavalava, voapetaka eo amin'ny sisin-davenona marefo. Fihetseham-panoherana avy any ambanivohitra (ny holatra vokatry ny tany Aspergillus sydowii ary ny bakteria olombelona Serratia marcescens) dia fantatra ho mpitsabo ho an'ny haran-dranomasina any Karaiba. ref
By adiresy fandrahonana anthropogenic (ny kalitaon'ny rano ary mihamitombo ny fitombenana) amin'ny alalan'ny fampivoarana ny fomba fitantanana ny morontsiraka, ny mpitantana dia afaka mampihena ny toe-javatra mitarika mivantana ny aretina.
Coral Disease, Tetik'asa momba ny tontolo iainana, ary ny fifandanjana eo amin'ny sampandraharahan'ny coral sy microbial
Aretina amin'ny toetr'andro Tropical Coral Reef: Hafatra fototra ICRI momba ny aretina mikraoba